“အမြိုးသမီးတှအေတှကျ အကြိုးကြေးဇူးမြားစတေဲ့ ငှကျပြောဖူးရဲ့ အံ့မခနျး အစှမျး” – စှယျစုံသုတ
းခြိုနှငျ့ သားအိမျကရြောဂါကာကှယျဖို့ မိနျးကလေးတိုငျး ငှကျပြောဖူး စားပေးသငျ့ !
ကြှနျမငယျငယျတုနျးကဆို မမေကေ ငှကျပြောဖူး မကွာခဏဆိုသလို ခကျြကြှေးလရှေိ့ပါတယျ။ သိပျကိုအရသာရှိပွီး စားကောငျးလှနျးလို့ အသားနဲ့တောငျမလဲနိုငျပါဘူး။ အခုတော့ အိမျနဲ့ဝေးနတောကွာပွီမို့ ငှကျပြောဖူး ကိုစားခငျြတိုငျး ဆိုငျတှမှော စြေးကွီးပေးပွီး ဝယျစားနရေပွီပေါ့ရှငျ။
ကနျြးမာရေးကောငျးမှနျဖို့အတှကျ ဆေးဝါးတှကေို အထူးတလညျမှီဝဲစရာမလိုပါဘူး။ ကြှနျမတို့နစေ့ဉျစားသုံးနတေဲ့ အစားအစာတှဟော ကနျြးမာပြျောရှငျခွငျးရဲ့ အခွခေံအရငျးအမွဈတှပေါပဲ။
ဒီတော့ ငှကျပြောဖူးစားတာ ဘယျလိုအကြိုးကြေးဇူးတှရှေိသလဲ
ဆီးခြိုရောဂါဝဒေနာရှငျတနေဲ့ နို့တိုကျမိခငျတှအေတှကျ အထူးကောငျးမှနျပါတယျ။
ဒါ့အပွငျ သားအိမျကိုလညျး ကွံ့ခိုငျစလေို့ သားအိမျကတြာမဖွဈနိုငျပါဘူး။
ဆီးချိုနှင့် သားအိမ်ကျရောဂါကာကွယ်ဖို့ မိန်းကလေးတိုင်း ငှက်ပျောဖူး စားပေးသင့် !
ကျွန်မငယ်ငယ်တုန်းကဆို မေမေက ငှက်ပျောဖူး မကြာခဏဆိုသလို ချက်ကျွေးလေ့ရှိပါတယ်။ သိပ်ကိုအရသာရှိပြီး စားကောင်းလွန်းလို့ အသားနဲ့တောင်မလဲနိုင်ပါဘူး။ အခုတော့ အိမ်နဲ့ဝေးနေတာကြာပြီမို့ ငှက်ပျောဖူး ကိုစားချင်တိုင်း ဆိုင်တွေမှာ ဈေးကြီးပေးပြီး ၀ယ်စားနေရပြီပေါ့ရှင်။
စာဖတ်သူတို့ကော ငှက်ပျောဖူးကို စားဖူးကြလား။ တိုင်းရင်းသားရိုးရာစားသောက်ဆိုင်တွေမှာ ငှက်ပျောဖူးဟင်းလျာကို ထည့်သွင်းရောင်းချကြပါတယ်။ ငှက်ပျောဖူး ဟာအရသာရှိရုံသာမက ကျန်းမာရေးအတွက် များစွာအထောက်အကူပြုပါတယ်။
ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ဖို့အတွက် ဆေးဝါးတွေကို အထူးတလည်မှီဝဲစရာမလိုပါဘူး။ ကျွန်မတို့နေ့စဉ်စားသုံးနေတဲ့ အစားအစာတွေဟာ ကျန်းမာပျော်ရွှင်ခြင်းရဲ့ အခြေခံအရင်းအမြစ်တွေပါပဲ။
ဒီတော့ ငှက်ပျောဖူးစားတာ ဘယ်လိုအကျိုးကျေးဇူးတွေရှိသလဲ
ဆီးချိုရောဂါဝေဒနာရှင်တေနဲ့ နို့တိုက်မိခင်တွေအတွက် အထူးကောင်းမွန်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် သားအိမ်ကိုလည်း ကြံ့ခိုင်စေလို့ သားအိမ်ကျတာမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။
“သငျ့ခန်ဓာကိုယျပျေါမှာ အညိုကှကျ အမဲကှကျတှပေျေါလာရတဲ့ အကွောငျးအရငျး(စုနျးစုပျတာ မဟုတျပါ)”
“ဆောငျးရာသီမှာ ကလေးတှေ နှာစေး နှာပိတျဖွဈနရေငျ ဒီနညျးလေး သုံးကွညျ့ပါ”
“ဆီးချိုအတွက် ဥသျှစ်သီး ဆေးနည်း”
ကြောင် ပန်း ရွက် ( လေ ဖြတ် လေ ဖြန်း အ ကြော ကပ် သူ တို့...
အံဆုံး ပေါက်ခြင်းကြောင့် နာကျင်ခြင်းကို သက်သာစေမယ့်...
ချောင်း ဆိုး ရင် ကြပ် သ လိပ် ကပ် သူ များ ချက် ချင်း...
“ဆံပင်တွေကျွတ် မျက်မှန်တွေတပ်နေရလို့ စိတ်ညစ်နေသူများ...
အာ ရုံ ကြော အား နည်း ခြင်း အ တွက် မြန် မာ့ ဆေး နည်း...